China Welded Wire Mesh orinasa sy mpanamboatra |Shengsong
Ny harato tariby welded dia efijery tariby metaly izay vita amin'ny tariby vy karbaona ambany na tariby vy tsy misy pentina.Misy amin'ny habe sy endrika samihafa izy io.Ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny fambolena, indostrialy, fitaterana, hortikultura ary sakafo.Izy io koa dia ampiasaina amin'ny toeram-pitrandrahana, zaridaina, fiarovana amin'ny milina ary haingon-trano hafa.
Izahay amin'ny maha-mpivarotra sy mpanamboatra tariby indostrialy lehibe indrindra dia manolotra tsipika feno vokatra vita amin'ny tariby welded ho an'ny fampiharana maro.
Wire harato welded, na welded tariby lamba, na "weldmesh" dia herinaratra fusion welded welded prefabricated mitambatra tariby ahitana andiana mirazotra longitudinal tariby miaraka amin'ny elanelana marina welded mba hiampita tariby amin'ny elanelana ilaina.
Fampiasana welded mesh:
Karazana tariby welded
Lamba tariby welded (WWF) ho an'ny fanamafisana slab simenitra / Electro galvanized welded tariby harato / Hot dipped galvanized welded mesh / PVC mifono welded mesh / Welded stainless vy harato / Welded tariby fefy tontonana / Welded vy bar gratings
Fihetezana coil/Sisiny notapatapahina/Sisiny notapatapahina kisendrasendra/Fanetezam-pandrefesana tsara/Fanetezam-boaloboka/Tontolo iainana/Manitsiana sy fisaka
Sakany: 0.5M-1.8M Halavany: 30M
Fitaovana: tariby vy ambany karbônina avo lenta, tariby Blackk na tariby Stainless vy
Fitsaboana amin'ny ety ivelany: Electro-galvanized, Hot-dipped galvanized, PVC coated
Fonosana: ①Moistureproof taratasy ②Plastika sarimihetsika ③Araka ny takinao
Ny welded tariby harato dia welded amin'ny faran'izay tsara lowcarbon vy tariby sy Passivated sy plasticized amin'ny alalan'ny mangatsiaka plating (electroplating), mafana fanatsoboka sy PVC plastika coating.Miaraka amin'ny fisaka ambonin'ny, na dia harato isa, mafy welding Spots sy miorina mafy rafitra, dia manasongadina ny matanjaka fahafenoana, ampahany tsara Machining fampisehoana, fahamarinan-toerana, tsara harafesiny fanoherana sy maika Fisorohana.
Izy ireo dia ampiasaina betsaka amin'ny indostria, fambolena, fanorenana, fitaterana ary fitrandrahana.
Toy ny fonon'ny fiarovana amin'ny milina, fiompiana fiompiana, fefy zaridaina, fender fiarovana varavarankely, fender passage, tranom-borona, harona atody, harona sakafo, sns.
Tena mety tsara amin'ny fitazonana omby, kisoa, osy, ary biby velona hafa voafefy. Maivana izy io ary mora mihetsika, ka mora entina.Miaraka amin'ny fananganana vy vita amin'ny ampahany iray, ity tontonana ity dia tena matanjaka sy mahatohitra sag, ka mahatonga azy io ho tontonana fikojakojana ambany sy kalitao avo lenta.Tsy ho rava na hirodana rehefa misy omby, kisoa, ondry na biby fiompy lehibe hafa miditra na mikotrika azy.
Fefy tariby Welded Hog:
* Ny coating zinc matevina, anti-harafesina, anti-corrosion.
* Malambolambo ambonin'ny sy malama welded tonon-taolana tsy misy burr, tsy mety handratra ny biby fiompinao.
* Mafy welded miaraka, mateza sy matanjaka.
* Mahatohitra ny fahapotehana sy ny firodanan'ny biby fiompy azy.
* Mitahiry ny fijery, mamorona fahatsapana toerana malalaka.
* Miaro ny biby lehibe kokoa toy ny alika sy ny serfa.
* Ny tontonana tariby welded dia mora amin'ny fametrahana sy fikarakarana.Bolt cutter hanapahana ny tontonana.
* Ny fefy tariby hog dia mora atsangana, tsy misy mihinjitra.
* Saika tsy misy fikojakojana.
* Tsy lafo - latsaky ny fefy hazo.
teo aloha: Crimped Mesh
Manaraka: Vidiny tsara indrindra ho an'ny China Yellow Color Extruded Plastic Safety Fence Road Barrier Mesh